Home Wararka Somalia oo ku eedeysay Kenya in ay dagaal danbiyeed caalami ah ku...
Somalia oo ku eedeysay Kenya in ay dagaal danbiyeed caalami ah ku gashay Soomaaliya
Dowlada Soomaaliya ayaa u gudbisay dacwad ka dhan ah dowlada Kenya Golaha Ammaanka taasoo la xiriirta duqeyn Ciidanka Kenya ka geysteen ee Gobolka Gedo. Dowlada Soomaaliya ayaa ku sheegtay dacwadeeda in Kenya ay dalka Soomaaliya ku gashay fal-danbiyeed caalami ah (War Crime).
Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cismaan (Abuukar Baalle) ayaa u gudbiyay caddeymo muujinaya in Haween iyo carruur waxyeelo ku gaartay duqeynta diyaaradaha Kenya. Abuukar Baalle Danjiraha Soomaaliye ee Qaramada Midoobay ayaa Golaha Ammaanka ka hor akhriyay cadeymaha ay heyso dowladda Soomaaliya ee la xiriira waxyeellada Ciidamada Cirka Kenya ay ka geysteen Gobalka Gedo, taasoo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay ku jiraan carruur iyo haween.
Waxa uu danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay sheegay in dadka waxyeeladu gaartay ay Dowladda Federaalka geysay magaalada Muqdisho si ay u helaan dawooyin iyo xuquuqda ay u baahan yihiin. Diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa duqeyn ka geystay horaantii bishan deegaanka Ceel-cadde iyo deegaano kale oo ka tirsan Gobolka Gedo waxaana ku geeriyooday hooyo iyo canug ay dhashay, halka dad kalena oo u badan Carruur ay dhaawacyo soo gaareen.